UWSA ကို စစ်တပ်က သင်တန်းပေးနေ - Cele Fans
[ April 23, 2021 ] စစ်တပ်ဘောမ ယုန်လေးကို ထိမိပိုင်နိုင်တဲ့ စကားလုံးဖြင့် ဒဲ့ဆဲချလိုက်တဲ့ မင်းမော်ကွန်	Celebrity
[ April 23, 2021 ] သူ့ကို ဒလံကြီး ကိုယ့်ကားကိုယ်မီးပြန်ရှို့တယ်ဆိုပြီးပြောနေကြတဲ့ သူတွေကို ပေါက်ကွဲစွာနဲ့ ပြန်လည်တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ယုန်လေး	Celebrity
[ April 22, 2021 ] တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ မှိုကွန်ချာကိုတွေ့ရင် မဖြစ်မနေ အရယူထားပါ…	Knowledge
[ April 22, 2021 ] (၃၂၀) တပ်ရင်းတခုလုံး စစ်သား မရှိတော့ပဲ စစ်သည်အမျိုးသမီးများသာကျန်ရှိ	Local News
[ April 22, 2021 ] မြန်မာပြည်သူများအတွက် အောင်လအန်ဆန်း တောင်းဆိုပြီ	Local News
HomeLocal NewsUWSA ကို စစ်တပ်က သင်တန်းပေးနေ
UWSA ကို စစ်တပ်က သင်တန်းပေးနေ
April 6, 2021 Cele Fans Local News 0
ဝလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (UWSA) က စင်ပြိုင်တပ်မတော်သဖွယ်ထူထောင်နေ၍ အတော်လေး သည်းခံနေရသည်ဟု ပြောဆိုဖူးသော စစ်တပ်သည် ယခုအခါ ထိုအဖွဲ့အား ဆေးသင်တန်းပို့ချပေးလျက်ရှိနေသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်မှုကို အစောဆုံးချီးကျူးထောပဏပြုခဲ့သည့် ၀ အဖွဲ့သည် အာဏာသိမ်းကတည်းက ရေငုံနုတ်ပိတ်နေခဲ့ပြီး ယခုအချိန်အထိ စစ်တပ်နှင့် မိတ်ဝတ်မပြတ်ဆက်ဆံရေးကောင်းဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း) မိုင်းဆက်မြို့ ဝမ်ဟုန်ကျေးရွာရှိ ဝမ်ဟုန်ဆေးရုံ၌ တြိဂံဒေသ တိုင်းစစ်ဋ္ဌာနချုပ် နယ်မြေခံဆေးတပ်ရင်းက UWSA တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် မိသားစုဝင်များကို ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ သင်တန်းအမှတ်စဉ် ၂/၂၀၂၁ နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ် ၁/၂၀၂၁ သင်တန်းတို့ကို ဧပြီ ၅ ရက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်း စစ်ကောင်စီက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသင်တန်းအမှတ်စဉ် ၂/၂၀၂၁တွင် သင်တန်းသား ၄၆ ဦးပါဝင်ကာ၊ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ် ၁/၂၀၂၁ တွင် သင်တန်းသား ၂၄ ဦးပါဝင်ပြီး သင်တန်းကာလသည် မေလ ၂၄ ရက်တွင် ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။
ပုံစာ- ၂၀၁၈ခုနှစ် ၂၁ရာစုပင်လုံညီလာခံကာလအတွင်း UWSA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျောက်ကော်အန်း ဖျားနာမှုကြောင့် နေပြည်တော် ကုတင် ၁၀၀၀ ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှု ခံယူစဉ် စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်က ဆန်ပြုတ်တိုက်ပြုစုခဲ့သည်။
Military gives training to UWSA
The Military is now providing medical training to United Wa State Army (UWSA), which has been described asarival army by the military.
The Wa, who were the first to praise Daw Aung San Suu Kyi’s election victory, have remained silent since the coup and seemed to maintain good relations with the military.
The Triangle Regional Military Command in Wan Hong Village, Mongsat Township, Eastern Shan State, on April5launchedamedical training course No. 2/2021 andamedical refresher course
No. 1/2021 for UWSA members and their families, according to the military council.
Medical Training Course No. 2/2021 has 46 trainees and Medical Refresher Course No. 1/2021 has 24 trainees and the training period will end on May 24.
Photo Caption: UWSA Vice-Chairman Kyauk Kaw Ann was treated rice gruel by the Military’s leader ata1,000-bed hospital in Naypyidaw during the 2018, 21st Century Panglong Conference.
ဝလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (UWSA) က စင္ၿပိဳင္တပ္မေတာ္သဖြယ္ထူေထာင္ေန၍ အေတာ္ေလး သည္းခံေနရသည္ဟု ေျပာဆိုဖူးေသာ စစ္တပ္သည္ ယခုအခါ ထိုအဖြဲ႕အား ေဆးသင္တန္းပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိေနသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္မႈကို အေစာဆုံးခ်ီးက်ဴးေထာပဏျပဳခဲ့သည့္ ၀ အဖြဲ႕သည္ အာဏာသိမ္းကတည္းက ေရငုံႏုတ္ပိတ္ေနခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ စစ္တပ္ႏွင့္ မိတ္ဝတ္မျပတ္ဆက္ဆံေရးေကာင္းဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) မိုင္းဆက္ၿမိဳ႕ ဝမ္ဟုန္ေက်း႐ြာရွိ ဝမ္ဟုန္ေဆး႐ုံ၌ ႀတိဂံေဒသ တိုင္းစစ္႒ာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမခံေဆးတပ္ရင္းက UWSA တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားကို ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ ၂/၂၀၂၁ ႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာမြမ္းမံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ ၁/၂၀၂၁ သင္တန္းတို႔ကို ဧၿပီ ၅ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေကာင္စီက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ေဆးဘက္ဆိုင္ရာသင္တန္းအမွတ္စဥ္ ၂/၂၀၂၁တြင္ သင္တန္းသား ၄၆ ဦးပါဝင္ကာ၊ေဆးဘက္ဆိုင္ရာမြမ္းမံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ ၁/၂၀၂၁ တြင္ သင္တန္းသား ၂၄ ဦးပါဝင္ၿပီး သင္တန္းကာလသည္ ေမလ ၂၄ ရက္တြင္ ၿပီးဆုံးမည္ျဖစ္သည္။
ပုံစာ- ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၂၁ရာစုပင္လုံညီလာခံကာလအတြင္း UWSA ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေက်ာက္ေကာ္အန္း ဖ်ားနာမႈေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္ ကုတင္ ၁၀၀၀ ေဆး႐ုံတြင္ ေဆးကုသမႈ ခံယူစဥ္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္က ဆန္ျပဳတ္တိုက္ျပဳစုခဲ့သည္။
မောင်နှမငါးယောက်မှာ လေးယောက်ကမျက်မမြင်ဖြစ်နေတဲ့ မိသားစုလေးရဲ့ လက်ရှိအပူမီး
စစ်တပ်ဘောမ ယုန်လေးကို ထိမိပိုင်နိုင်တဲ့ စကားလုံးဖြင့် ဒဲ့ဆဲချလိုက်တဲ့ မင်းမော်ကွန်
သူ့ကို ဒလံကြီး ကိုယ့်ကားကိုယ်မီးပြန်ရှို့တယ်ဆိုပြီးပြောနေကြတဲ့ သူတွေကို ပေါက်ကွဲစွာနဲ့ ပြန်လည်တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ယုန်လေး
(၃၂၀) တပ်ရင်းတခုလုံး စစ်သား မရှိတော့ပဲ စစ်သည်အမျိုးသမီးများသာကျန်ရှိ
မြန်မာပြည်သူများအတွက် အောင်လအန်ဆန်း တောင်းဆိုပြီ